Indlela Eyona Ngcono Yokuchonga iBotnet Malware Ngokuya ku-Semalt
I-malnet ye-Botnet inekhono lokukhawulela ubude kunye neendawo ezahlukileyo. Kuthetha ukuba inethiwekhi yeZombi kunye ne-bots ingadibanisa lula inani elikhulu lehlabathi emhlabeni. Olu buchule lenza i-malnet ye-botnet ingxaki yelizwe lonke, kwaye iinzame ezichasene nayo kufuneka zithathwe ngokukhawuleza. UFrank Abagnale, u-8 (Semalt Umphathi wempumelelo yomThengi, uchaza ukuba i-malnet malware yinkonzo yeekhomputha ze-HIV. Ziquka kunye phantsi kolawulo olupheleleyo lwe-spammer, hacker okanye umhlaseli. Zonke izixhobo ezizimeleyo eziyinxalenye yale nethiwekhi zibizwa ngokuba yi-bots.
Ukufumanisa i-malnet ye-malnet kunye nokukhusela kwayo:
Ukufunyanwa kwe-malnet ye-malware akulula njengoko kulungiselelwe ukuba kusebenze ngaphandle kokusenza sazi nantoni na malunga nokugcina kwabo. Nangona kunjalo, kukho ezinye iindlela zokuzifumana kwaye ziwaphephe kalula.
Imithombo yeendlela ze-IRC zibandakanya iibhotile kunye ne-botmasters ezisebenzisa i-IRC ukunxibelelana
2. Isithuthi esiphezulu esiphuma seSTP
I-trap ephezulu ephumayo ye-SMTP kufuneka iqwalaselwe ngokukhawuleza.
3. Izixhobo ze-Anti-Botnet
Izixhobo zokulwa ne-botnet zilungile kwaye ziqinisekisa iziphumo eziphezulu. Iifestile ezingasalindelekanga kunye neefayile ze-botnet malware.
4. Ikhomputha encinane
Ikhomputha yecomputer okanye idivayisi yeselula ene-CPU ephezulu okanye ukusetyenziswa kwememori kukubonakaliswa kwe-botnet malware
Ulwaphulo lwezithuthi lubandakanya iPort 6667 esiyisebenzisa kwi-IRC, kwi-Port 25 esiyisebenzisa kwiimeyile ze-spam, kunye ne-Port 1080 esisebenzisa kuyo iseva yommeleli
6. Imiyalezo ephumayo
Imilayezo ephumayo ayithunywanga ngabasebenzisi abenzileyo. Enyanisweni, bathunyelwa ngebhodi
7. Iingxaki kunye nokufikelela kwe-intanethi kunye nesantya
Ukuba uhlangabezana nemibandela enxulumene nokufikelela kwi-intanethi kunye nesivinini, amathuba kukuba idilesi yakho ihlaselwe yi-malnet malware.
8. Uthungelwano lwenethiwekhi
Umsebenzi kunye nemisebenzi yenethiwekhi yakho kufuneka ihlolwe rhoqo
9. Iifenethi zesofthiwe
Zonke iiprogram zekhompyutheni yakho okanye isisfowuni yeselula kufuneka zihlaziywe ngokukodwa ukhuseleko lwakho kunye neenkqubo zokulwa ne-malware
Abasebenzisi kufuneka bakhusele iifowuni zabo kwi-bots ebungozi ngokufaka ii software kunye neenkqubo
Ukubunjwa kwe-botnet malware kwi-intanethi:
I-bot iyakhiwa xa ikhompyutha okanye isistim ephathekayo isulelekile ngegciwane okanye i-malware. Oku kukuvumela abacuki ukuba balawule loo fowuni ngokude, kwaye awukwazi ukuba nantoni malunga nayo. Abahlaseli okanye abahlaseli abalawula iibhota badluliselwa kubalusi beebhotile okanye i-botmasters. Abahlaseli okanye abahlaseli basebenzisa iibhota ngezizathu ezahlukeneyo; abaninzi babo basebenzisa i-bots kunye neentsholongwane ze-cybercrime. Izicelo eziqhelekileyo ze-botnet ziyi-anti-service-attack attack, i-email spam campaign, ubusela be-data, kunye ne-adware okanye i-spyware.
Uhlaselo lwe-malnet malware luqala njani?
Ukuhlaselwa kwebhotnet kuqala ngokubanjwa kwebhodi. Abaxhasi be-botmasters bafumana i-bots ukusasaza iimbungu, ii-virus kunye ne-malware. Kuye kusetyenziswe ukudibanisa nokuchaphazela inani elikhulu leekhompyutheni ezinokuthi okanye zingenayo i-antivirus program. Iintsholongwane ze-botnet zidibanisa kwisixhobo sakho kwaye zilawule amaseva. Ukusuka apho, abahlaseli banokuqhagamshelana nokulawula i-bots, banika imisebenzi ethile. Xa ama-botnets afinyelela ubungakanani obufunekayo, abelusi banokuxhaphaza iibhentshi zokwenza uhlaselo oluthile, olunjengomncedisi okhululiwe, ukweba ulwazi lomntu, nqakraza ubuqhetseba nokuthumela ii-imeyli ze-spam Source .